WebM - GNU / Linux တွင် Open source ဗွီဒီယိုဖိုင်ကိုစီမံခြင်း Linux မှ
WebM, လိုပဲ WebP, တစ်ပုံစံဖြစ်ပါတယ် open source ဖြစ်ပြီး အသုံးပြုနေသူများကဖန်တီး Google, ဒါပေမယ့်ဒီအမှု၌တည်၏ မာလ်တီမီဒီယာဖိုင်များဆိုလိုသည်မှာဗီဒီယိုများဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုနှစ်ပေါင်းများစွာဖြန့်ချိခဲ့ပြီးဖြစ်သော်လည်း၎င်းပုံစံကိုထုတ်လုပ်ပြီးနောက်တွင်ဖြစ်သည် WebP.
အခြေခံအားဖြင့်ဖန်တီးခြင်း WebM အပေါ်အာရုံစူးစိုက် ဗီဒီယိုဖိုင်များ၏စီမံခန့်ခွဲမှုတိုးတက်လာသည် မည်သည့်စက်ပစ္စည်းမှမဆိုအင်တာနက်ဗီဒီယိုများကိုပိုမိုကောင်းမွန်သောနည်းဖြင့်ပုံနှိပ်ထုတ်လွှင့်ခြင်းကိုအဓိကရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်သည်။
ဒီပုံစံအသစ် WebM စတင်ဖွဲ့စည်းကတည်းကပိုမိုထိရောက်သောအသုံးပြုမှုအတွက်ဒီဇိုင်းဆွဲထားပြီးပေါင်းစပ်ထားသည် HTML5။ ထို့အပြင်၏အသုံးပြုမှုကိုစေရန် VP8 နှင့် VP9 codecs အောင်မြင်ရန် စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာချုံ့။ နည်းသောကွန်ပျူတာစွမ်းအားဖြင့်ပင်ထုတ်ယူနိုင်သည်။
ထို့အပြင်အများပြည်သူအသိပညာဖြစ်သကဲ့သို့, YouTube ကို၏လက်အောက်ခံအဖြစ် Googleလက်ရှိဗွီဒီယိုများအားလုံးကို WebMမူရင်းဖိုင်ပုံစံမည်သို့ပင်ရှိစေကာမူ၊ ဗွီဒီယိုတစ်ခုကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်သောအခါ၎င်းသည်၎င်း၏ပုံမှန်ပုံစံဖြစ်သည်။
ပိုမိုသိရှိရန် FromLinux ရှိ WebP သင်ယခင်ဆက်စပ်ဆောင်းပါးများကိုဖတ်ရှုနိုင်သည်
FFmpeg တွင် WebM အတွက်အထောက်အပံ့ပါဝင်သည်
တရားဝင်ဖြစ်သည်။ FSF သည် WebM ဗွီဒီယိုဖိုင်ကိုထောက်ခံကြောင်းကြေငြာခဲ့သည်
OggConvert ဖြင့် Linux ရှိ ogg / ogv, webm သို့မဟုတ် mkv သို့ပြောင်းပါ
ထိုအပုံစံအကြောင်းကိုပိုမိုဖတ်ရှုဖို့ WebPဖတ်နိုင်သည် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယခင် post ကို ဤရန်, ခေါ်:
1 WebM - ပွင့်လင်းတဲ့အရင်းအမြစ်ဗွီဒီယိုဖိုင်
1.1 Thunar ရှိ WebM video thumbnails
1.2 WebM ဗွီဒီယိုများကိုဖွင့ ်၍ တည်းဖြတ်ပါ
1.3 ဗွီဒီယိုများကို WebM သို့ဖန်တီးရန် (ပြောင်းလဲရန်) အွန်လိုင်းကိရိယာများ
WebM - ပွင့်လင်းတဲ့အရင်းအမြစ်ဗွီဒီယိုဖိုင်
ပုံစံ WebM တစ်ခုရှိပါတယ် တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက် အဲဒါကိုအဖြစ်ဖော်ပြထားတဲ့ဘယ်မှာ:
"WebM သည်ဖိုင်ကွန်တိန်နာ၊ ဗွီဒီယိုနှင့်အသံပုံစံများ၏ဖွဲ့စည်းပုံကိုသတ်မှတ်သည်။ WebM ဖိုင်များတွင် VP8 သို့မဟုတ် VP9 ဗွီဒီယိုကုဒ်များနှင့်ချုံ့ထားသောဗီဒီယိုစီးဆင်းမှုများနှင့် Vorbis သို့မဟုတ် Opus အသံကုဒ်များနှင့် compressed အသံစီးများပါဝင်သည်။ WebM ဖိုင်ဖွဲ့စည်းပုံသည် Matroska ကွန်တိန်နာပေါ်တွင်အခြေခံသည်".
Thunar ရှိ WebM video thumbnails
ထိုအမည်ကိုဖိုင်တွင်ထည့်ပါသို့မဟုတ်အတည်ပြုပါ «ffmpegthumbnailer.thumbnailer» အောက်ပါ Command ဖြင့်:
အောက်ပါရည်ညွှန်းသည် «video/webm» နှင့်စတင်သည်သော configuration line ၌တည်၏ «MimeType» အကြောင်းအရာတွေဟာအောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်းဖြစ်တယ် -
ဖွင့်လှစ်ခြင်းဖြင့်အသုံးပြုသူ session ကိုနှင့်စမ်းသပ်မှု Restart သွန်း ပုံရိပ်များ၏ thumbnails ကြည့်ရှုရန် WebM.
မှတ်ချက်အထုပ်ကို install လုပ်ထားတာကိုအတည်ပြုပါ «ffmpeg, ffmpegthumbnailer y libvpx5»။ ဤနောက်ဆုံးအထုပ်သည်ဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့်ပြန်လည်သိုလှောင်ရာနေရာများပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားသောဗားရှင်းတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်သည်။ «libvpx6 y libvpx7».
WebM ဗွီဒီယိုများကိုဖွင့ ်၍ တည်းဖြတ်ပါ
ထိုကဲ့သို့သောအလုပ်များအတွက်ငါ universal အသုံးပြုရန်အကြံပြုပါသည် ဗွီဒီယိုဖွင့်စက် VLC နှင့်ဗီဒီယိုအယ်ဒီတာ Pitivi။ မတူတာက WebP, WebM ပိုမိုအတွက် universal ဖြစ်ပါတယ် GNU / Linux အက်ပ်များဆိုလိုသည်မှာ၎င်းသည်အများစုတွင်ပိုမိုအထောက်အပံ့ရှိသည် ဗွီဒီယိုဖွင့်စက်များနှင့်အယ်ဒီတာများ.
ဗွီဒီယိုများကို WebM သို့ဖန်တီးရန် (ပြောင်းလဲရန်) အွန်လိုင်းကိရိယာများ
ဖြစ်ရပ်တွင်, လက်ပေါ်မှာရှိခြင်းမဟုတ် GNU / Linux များ သော်လည်း, ထိုကဲ့သို့သောအလုပ်အတွက်ကောင်းသောလျှောက်လွှာ VLC ထို့အပြင်၎င်းအတွက်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်သည် မြဝတီဖိုင်ဖိုင်များကဲ့သို့များစွာသောအရာများကိုပြောင်းလဲရန်အွန်လိုင်းတွင်ကောင်းသောကိရိယာများအမြဲရှိသည်။ ဗီဒီယိုများ။ ဒါပေမယ့်အထူးသဖြင့်ဗီဒီယိုများအတွက် WebM ကျွန်ုပ်တို့ကြိုးစားသင့်သည် - အွန်လိုင်း UniConverter.
ငါတို့မျှော်လင့်ပါတယ် "အကူအညီအနည်းငယ်သာပို့စ်" ခေါ်ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ်ဗီဒီယိုအမျိုးအစားအကြောင်းကို «WebM» လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာကဂူဂဲလ်မှ၎င်းနှင့်ဤပုံစံဖြင့်ဗွီဒီယိုများကိုမည်သို့စီမံခန့်ခွဲပုံကိုဖန်တီးသည် GNU / Linux များ; အများကြီး အကျိုးစီးပွားနှင့် utility ကိုတစ်ဖွဲ့လုံးအတွက် «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» နှင့်၏အံ့သြစရာ, အလွန်ကြီးမားသောနှင့်ကြီးထွားလာ၏ applications များ၏ဂေဟစနစ်၏ပျံ့နှံ့ဖို့ကြီးစွာသောအလှူငွေ၏ «GNU/Linux».
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » WebM - GNU / Linux ပေါ်ရှိအရင်းအမြစ်ဗွီဒီယိုဖိုင်ကိုစီမံပါ
PeerTube 2.3 ဗားရှင်းသစ်ကိုဖြန့်ချိခဲ့ပြီးပါ ၀ င်သည့်စည်းကမ်းချက်များပါ ၀ င်သည်